Malunga nathi -Shinva Medical Instrument Co., Ltd.
IShinva Medical Instrument Co, Ltd. yasekwa ngo-1943 kwaye yadweliswa kwiShanghai Stock Exchange (600587) ngoSeptemba 2002.
Liqela eliphambili kushishino lwempilo yasekhaya elidibanisa uphando lwezenzululwazi, imveliso, ukuthengisa, iinkonzo zonyango kunye nokuhanjiswa kwempahla kwizixhobo zonyango kunye nezamayeza.
Kwicandelo lezixhobo zonyango, kuye kwasekwa imigca esithoba yemveliso enobumbeko olugqwesileyo kunye netekhnoloji epheleleyo, egubungela ulawulo losulelo, i-radiotherapy kunye nokucinga, izixhobo zotyando kunye namathambo, igumbi lobunjineli kunye nezixhobo, izixhobo zamazinyo kunye nezinto ezisetyenziswayo, in-vitro reagents diagnostic kunye izixhobo, izinto zebhayoloji kunye nezinto ezisetyenziswayo, izixhobo zedialysis kunye nezinto ezisetyenziswayo, ukhuseleko kwindalo esingqongileyo kunye nezinye iinkalo. Okwangoku, iintlobo ezahlukeneyo kunye nemveliso yezixhobo zolawulo losulelo phakathi kwezona ziphezulu ehlabathini. I-R & D kunye nokuveliswa kwezixhobo zeradiotherapy zikhulu ngomlinganiso, zigqityiwe ngokwahlukeneyo, ziphezulu kwizabelo zentengiso yasekhaya kwaye zikhokelela kwinqanaba lobugcisa.
Kwicandelo lezixhobo zoxubo mayeza, lenziwe ngamaziko amakhulu obuchwephesha kwezobunjineli: i-bio-pharmaceuticals, ukumiliselwa okukhethekileyo, amalungiselelo amayeza esiTshayina kunye namalungiselelo aqinileyo. Idibanisa uphando kunye nophuhliso, ukuvelisa kunye nokuthengisa izixhobo zamayeza. Ukongeza kwimveliso yezixhobo eziqhelekileyo zoxubo mayeza, inika ubathathu emnye "wetekhnoloji yoxubo mayeza, izixhobo zamayeza kunye nobunjineli bamayeza" ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu. Kwangelo xesha, inika yonke inkonzo yephakheji yokwakha amayeza amachiza, amayeza endalo kunye nemizi-mveliso yamayeza ezityalo, kwaye isombulula onke amaxhala kubathengi.
Kwicandelo leenkonzo zonyango, iShinva iqhubekile yaphucula ukhuphiswano lwentengiso kunye nodumo. Ukuthembela kutyalo-mali lobungcali, ulwakhiwo, ukusebenza, ukuthengwa kwempahla kunye namaqonga enkonzo, siya kwakha iqela lasesibhedlele lanamhlanje elinamaqondo onyango aphezulu, inqanaba lophando lwenzululwazi, ulawulo lwentengiso kunye nokudityaniswa kwezixhobo.
Kwicandelo lezonyango kunye nezorhwebo, uShinva uphendula ngokukuko kwimodeli yentengiso entsha kunye notshintsho, ugcina ukhuphiswano oluzinzileyo lwenkampani kunye namandla ophuhliso olusempilweni, kwaye wenza imodeli yokuhlola kunye nokwenza izinto ezintsha.